Muqdisho: Dagaal Culus oo Maalintii Labaad Socda
Dagaalka oo ay si weyn ay ugu qeyb qaadanayeen maanta ciidamada AMISOM ayaa saameeyay degmooyinka C/Casiis, Shibis iyo Kaaraan.
Dagaalkan ayaa inta la xaqiijiyay waxa ku geeriyooday 20 ruux, halka tira ka badan 70 qof ay ku dhaawacmeen, kadib markii ay madaafiic ku habsadeen xaafadihii ay daganaayeen sida ay xaqiijinayaan gaadiidka gurmadka Muqdisho iyo goobaha caafimaadka magaalada.
Cali Muuse Sheekh oo ka mid ah saraakiisha gaadiidka gurmadka deg deg ah ayaa sheegay in ay qaadeen dhaawacyada 83 qof oo dhamaantood ahaa dad rayid ah kuwaasi oo ku waxyeeloobay dagaaladii iyo duqeymihii maanta oo Khamiis ahayd ka dhacay Waqooyiga Muqdisho.
Xaafadda Jamhuuriya ayaa ka mid ah meelaha qasaaraha ugu badan uu dhacay sida ay VOAda ay u sheegeen goob joogayaal ku nool xaafadaasi .
Dhinacayada dagaalka uu u dhaxeeyo ayaa mid kasta sheeganaya in uu guula ka gaaray dagaalka 2da maalmood ka socda magaalada Muqdisho .
Wasiiru-dowlaha gaashaandhiga Sheekh Yuusuf Maxe’d Siyaad Indhacade oo shir jaraa’id ku qabtay magaalada Muqdisho, ayaa sheegay in dowlada ay maanta la wareegtay gooba maalintii shalay laga qabsaday isla markaana ay qasaare u gaysteen dhinacyada ka soo horjeeday .
Dhanka kale Afhayeenka Al-Shabaab Sheekh Cali Maxuud Raage “Cali Dheere” ayaa sheegay in iyaga ay ku gacan sareeyeen dagaalka maanta oo ay gubeen Taangi ay lahaayeen ciidamada AMISOM inta uu dagaalka socday, islamarkaana ay fariisimadii dowlada ay ku sugneyd ay gabi ahaan la wareegeen .
Ilo xog ogaal ah ayaa VOAda u xaqiijiyay in Al Shabaab ay dagaal rogaal celis ah duhurnimadii manta Khamiis ahayd kula wareegtay fariisimo kuyaala Hoteelka Golobal ee Magaalada Muqdisho oo ay saakay ku sugnaayeen ciidamada dowlada iyo AMISOM .
Dagaaladan ku soo nqonoqnaya magaalada Muqdisho oo muddo labaatan sano ku dhow gudaha magaalada si goos goos ah uga socday, ayaa keenay xadgudbyo dhinaca xuquuqda aadamaha ah, waxaana ka warramaysa Maryan Taqal Xuseen oo ka tirsan ururka Haweenka ee COGWO ayaa Dadka rayidka ah ee ku nool caasimadda Muqdisho ay u qaybsameen in barkacday iyo in ku hadhay gudaha Magaalada waxaana kala duwan saamaynta ay dagaalddu ku yeesheen dadweynaha kuwa qaxay iyo kuwa hadhay .
Dhibaatada kale ee jirta ayaa ah sida ay sheegayaan dadka u ololeeya xuquuqda aadamaha ayaa ah inaanay jirin cid haba yaraatee ka hadli karta xadgudbyada intaasi leeg ee sida joogtada ah u dhacaya .
Dagaaladan ka soo cusboonaaday magaalada Muqdisho ayaa ku soo beegmaya iyada oo maalmihii u dambaysay ay isku xamaan urursanayeendawladda iyo kooxaha ka soo horjeeda, iyada oo dawladu ay ballan qaaday in ay qaadi doonto weerar kama dambayn ah oo lagu kala bixi doono .